Miandry inona ny sasany ? | NewsMada
Miandry inona ny sasany ?
Par Taratra sur 09/08/2018
Rajoelina Andry, Ravelonarivo Jean, i Mailhol André Christian ary i Ernaivo Fanirisoa. Ireo aloha, hatreto, ny kandidà vonona sy efa nametraka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina etsy amin’ny HCC Ambohidahy. Na inona na inona resahina, efa zava-dehibe izany, satria midika ho fahavononana hiatrika ity raharaham-pirenena ity.
Mba aiza kosa ny sasany ? Efa ampolony mahery ireo nanao fanambarana sy manangasanga ny maha kandidà ho filoham-pirenena azy. Toa tsy maika ny hametraka ny antontan-taratasy anefa izy ireo. Miandry inona? Sahy sa hihemotra? Eo ny tena fanontaniana mila valiny ho an’ny mpanara-baovao.
Ny mpanara-baovao hatrany no nanasokajy ireo kandidà ho kely na lehibe. Ambara fa kandidà lehibe ireo heverina fa manana olona maro mpanohana, manana antoko goavana fa indrindra, manam-bola hampiasaina. Any amin’ny sasany amin’izy ireo mihitsy no mitodika ny sain’ny mpanara-vaovao: fa mbola miandry inona?
Kandidà lehibe, manana antoko goavana ary manam-bola hampiasaina (sy efa mampiasa izany) ny filoham-pirenena am-perinasa. Raha ny fihetsiketsehan’ny antoko HVM farany teo, heverina fa efa vonona hanohy ny fotoam-piasany ny filoha. Tsy fantatra kosa hoe, vonona amin’io datim-pifidianana efa napetraka io ve?
Kandidà lehibe faharoa, andrasan’ny maro ary fantatra fa mbola matanjaka, ihany koa Ravalomanana Marc. Efa ela izy no nitety faritra ary tazana etsy sy eroa hatrany. Mbola misy andrasan’ity filoha teo aloha ity ve? Anisan’ireo efa ela no maika amin’ny fifidianana anefa izy mba hiverenany indray hitondra ny firenena.
Ny mampanahy ny mpanara-baovao, sao antony hafa ny tsy maha rototra ireo kandidà sasany. Sao misy mihevitra ny hanemotra ny datim-pifidianana? Sa misy mikasa ny hanafoana izany mihitsy? Tsy raharahan’ny mpilatsaka hofidina irery izay fa raharaham-pirenena mihitsy. Efa maika te hiova sy hanova ny ankamaroany. Samy te hanarina sy hampandroso. Koa maninona no tsy miseho tava amin’izay daholo mba misy hakan’ny mpifidy bahana tsara ihany koa?